Andranomena : Zanaka karana nalaina an-keriny -
AccueilRaharaham-pirenenaAndranomena : Zanaka karana nalaina an-keriny
Tovolahy 17 taona antsoina hoe Firoze Nourbhay, zanaka karana tompon’ny tranombarotra Eden etsy Behoririka no nalaina enin-dahy misaron-tava an-keriny omaly maraina, tokony ho tamin’ny 06 ora. Teny Andranomena no nisehoan’izany. Nirongo basy kalaky miisa telo sy basy poleta roa ireo olon-dratsy ireo ary nitondra fiara Renault espace miloko volon-davenona. Araka ny tati-baovao dia nijanona teo akaikin’ny fiara 4×4 n’ireo polisy niasa sy nitandro ny filaminana teny amin’iny faritra iny ireo mpaka an-keriny ireo. Nivoaka ny roa tamin’ireo olon-dratsy ireo ary nanatona io fiara 4×4 io. Nanambana basy no sady nitaky ny hamoahana ny basy tany amin’ireo manam-pahefana tao anatin’io fiara io. Tsy vitan’izany fa mbola nasain’ ireo mpanao “kidnapping” niondrika ambany ireo polisy ireo.Talohan’ny nitsoahan’ireo olon-dratsy ireo dia notifirin’izy ireo ny radiateran’ilay 4×4, ka nipitika tany amin’ny iray tamin’ireo polisy tao anatin’io fiara io ny bala, ary nikasoka teny amin’ny faritry ny lohany. Vokany, naratra io mpitandro filaminana io. Ilay tovolahy karana niandry fiara fitaterana an-tsekoly teny an-toerana kosa dia nitsoaka avy hatrany vao naheno ny feom-basy. Nenjehin’ny roa hafa tamin’ireo olon-dratsy io teratany vahiny mpianatra eny amin’ny Lycée français Ambatobe io , ka tsy lasa lavitra akory dia tratran’ireo mpaka an-keriny ireo. Nafatratr’izy ireo tao anatin’io fiara Renault espace io ity farany, ary nentin’izy ireo nirifatra avy eo.
Rehefa tonga teo amin’ny sampanan’Ambohitrimanjaka dia nifindra tao anaty fiara taxi izay efa niandry teo ireo mpanao “kidnapping” sy ny niharan’izany, ka najanon’izy ireo teo ilay fiara Renault espace . Taorian’izay dia dify tsy hita intsony izy ireo na dia efa niezaka nanenjika sy namaly ny tifitra nataon’izy ireo aza ireo polisy avy ao amin’ny boriborintany fahenina sy ny polisy avy ao amin’ny UIR . Tsy niandry ela ihany koa ireo mpitandro filaminana ireo fa niroso avy hatrany tamin’ny fisavana io fiara io. Tamin’izany no nahitana fitoeram-bala amin’ny endriny maro miisa 21. Ankoatra izay dia nahitana taim-bala-na basy kalaky ihany koa teo amin’ny toerana nitrangan’ilay fitifirana . Tsy misy atahorana ny ain’ilay polisy voan’ny bala io, ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ity farany. Misokatra ny fanadihadiana ary mandeha ny fikarohana ireo olon-dratsy ireo amin’izao fotoana izao izay sahanin’ny polisy misahana ny ady heloka bevava etsy Anosy. Raha tany amin’ny faritanin’i Toamasina no tena nandrenesana ity raharaha “kidnapping” ity dia efa tonga eto an-drenivohitra indray izany ankehitriny. Raha ilay mpandraharaha tompona orinasa mihitsy no lasibatra teo aloha, dia efa ny zanak’izy ireo indray no ataon’ireo olon-dratsy sorona amin’izao fotoana izao. Ny nahasamihafa an’ity “kidnapping” ity tamin’ireo fakana an-keriny karana niseho dia nanaiky ny hiara-hiasa amin’ireo mpitandro filaminana ny fianakavian’ilay niharan’izany. Andrasana noho izany ny mety ho fivoaran’ny toe-draharaha.